Axmed Madoobe oo sheegay in Jubbaland aysan doorasho ku qabanaynin Gobol nidaamkiisa uusan hoos iman – Kalfadhi
Axmed Madoobe oo sheegay in Jubbaland aysan doorasho ku qabanaynin Gobol nidaamkiisa uusan hoos iman
December 7, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha Dowlada Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa maanta kaga qeyb-galay hab maqal iyo muuqaal ah shirka iskaashiga Soomaaliya iyo beesha Caalamka.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa diirada ku saaray arrimaha amaanka iyo Doorashooyinka, waxaana uuna xusay muhiimada ay leedahay in laga wada shaqeeyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka xiligan xasaasiga ah.
Madaxweynaha oo ka hadlayay Gobolka Gedo iyo doorka Doorashada ee Jubaland ayaa sheegay in Jubaland ay diyaar u tahay Doorashada in ay ka qeyb gasho balse aanay Doorashada ku qabanaynin gobol aanu nidaam hoos yimaada ka jirin.
Wuxuu intaas ku daray Madaxweynahu in Dowlada Federaalka ah looga baahan yahay inay arintaas si dhab ah u qaadato isla markana ay Ciidamada iyo Maamulka ay halkaas gaysay ay kasoo saarto kuwaan wareejiso Dowlada Jubaland.
Waxaa uu sheegay in loo baahan yahay Doorasho la isla ogolyahay oo la tashiga iyo dhagaysiga dadku ay udub dhexaad u yihiin, si gaar ah arrimaha Gobolada waqooyi ayuu sheegay in ay muhiim tahay in dib loo eego iyadoo aan la iska Indho tiraynin dadka tabashooyinka qaba gaar ahaan Gudoomiyaha Aqalka Sare oo mid kamid ah xilalka dalka ugu sareeya ku matala Gobolada waqooyi.
Madaxweynaha ayaa ku booriyay Xukuumada Federaalka ah inay qaadato doorka ay ku leedahay shaqada socota isla markana ay ka shaqayso sidii khilaafyada jira xal loogu heli lahaa, dalkana ay uga dhici lahayd Doorasho loo dhan yahay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ku guud-darreystay kulamadii Baladweyne oo dib ugu laabtay Jowhar
Madaxweynaha Koonfur-Galbeed oo sheegay in ay diyaar u yihiin fulinta qodobaddii kasoo baxay heshiiskii doorashada